Institut national de leadership : voatendry ho filoha Rakotondraibe Mamy | NewsMada
Institut national de leadership : voatendry ho filoha Rakotondraibe Mamy
Voatendry ho tale jeneraly vaovao ao amin’ny DHL International Madagascar Andrianaharison Yves, manomboka izao volana avrily izao. Izy no mandimby an’i Rakotondraibe Mamy, nomena andraikitra hafa, rehefa niasa mafy nampihatra ny fahaizany tamin’ny maha tale jeneraly azy nitondra ny DHL. Koa hanomboka ny 1 jona ho avy izao, hitantana ny Ivontoerana momba ny fikarohana sy ny fanofanana Rakotondraibe Mamy, mifantoka indrindra ho amin’ny fahaiza-mitantana. Mahasahana ny herin’ny toekarena rehetra izany amina sehatra rehetra.
Hifantohan-dRakotondrabe Mamy io fahaiza-mitantana io, mahita ny fahatarana eto amin’ny firenena eo amin’ny fanabeazam-pirenena, fanofanana arak’asa, indrindra ny tsy fahampian’ny kolontsaina fahaiza-mitarika, izay mbola hita amin’ny taranaka ankehitriny. Ireo anefa no tena miantoka ny fampandrosoana, fototra ho an’ny fanavaozana. Samy miara-mahita isika, ankehitriny, fa tsy nihetsika, noho izany ny toekarena.
Miara-miombon’antoka amin’ny DHL sy ireo mpanohana eto an-toerana sy avy any ivelany izany Ivontoerana ho amin’ny fanatanterahana ny fandaharanasa sy manome lanja izany. Zahana izay fomba tokony hamahana ny olana eto Madagasikara, hampandehanana ny toekarena eto an-toerana, amin’ny fanovana toe-tsaina.
Ankehitriny, filohan’ny fikambanana ao amin’ny HEC (Hautes études commerciales) Paris sy filohan’ny Addev (Agir pour le développement durable et l’économie vert) ihany koa izy ; mpanofana izay ho mpitantana ny DHL aty Afrika, ary izy koa ny namorona ny fandaharanasa Programme Go-Teach an’ny DHL sy SOS Village hita amin’ny firenena 30.